Nhau - China neNew Zealand nemusi weChipiri vakasaina gwara rekuvandudza chibvumirano chavo chemakore gumi nemaviri (FTA)
China neNew Zealand neChipiri dzakasaina mutemo wekuvandudza chibvumirano chavo chemakore gumi nemaviri (FTA)
China neNew Zealand neChipiri dzakasaina chibvumirano chekuvandudza chibvumirano chavo chemakore gumi nemaviri chekusununguka (FTA), chinotarisirwa kuunza mabhenefiti kumabhizimusi nevanhu venyika mbiri idzi.
Iyo FTA kukwidziridzwa inowedzera zvitsauko zvitsva pa e-commerce, kutenga kwehurumende, makwikwi mutemo pamwe nenzvimbo nharaunda nekutengeserana, kuwedzera mukuvandudzwa kwemitemo yezvakabva, maitiro etsika uye kufambisa kutengeserana, zvipingamupinyi zvehunyanzvi mukutengesa nekutengesa mumasevhisi. Pahwaro hweRegional Comprehensive Economic Partnerhip, China ichawedzera kuvhura kwayo muzvikamu zvinosanganisira ndege, dzidzo, mari, kuchengetwa kwevakwegura, uye kutakura vanhu kuenda kuNew Zealand kusimudzira kutengeserana mumasevhisi. Iyo yakagadziridzwa FTA ichaona nyika mbiri dzichizarura misika yavo kune mamwe matanda uye zvigadzirwa zvemapepa.
New Zealand ichadzikisa chikumbaridzo chayo chekuongorora kudyara kweChinese, ichiitendera kuti igamuchire kurapwa kwakafanana senhengo dzeComprehensive uye Progressive Chibvumirano cheTrans-Pacific Partnership (CPTPP).
Yakawedzera zvakapetwa kaviri chikamu chevadzidzisi veChinese Mandarin uye maChinese mafambiro ekushanya anoshanda munyika kusvika mazana matatu nemazana maviri, zvichiteerana.
Hupfumi hweUS hwakaita chibvumirano che3,5 muzana mugore ra2020 pakati pe COVID-19 kudonha, kuderera kukuru kwegore rose kweUS zvigadzirwa zvemumba (GDP) kubvira 1946, sekureva kwedhata rakaburitswa neUS Commerce department neChina.
Kuderedzwa kunofungidzirwa kweGDP kwe2020 ndiko kuderera kwekutanga kwakadaro kubvira kudonha ne2,5% muna2009. Ikoko ndiko kudzikira kwakadzama kwegore kubva hupfumi hwadzikira 11.6% muna 1946.
Iyo data zvakare yakaratidza kuti hupfumi hweUS hwakakura pamutengo wepagore we4 muzana mukota yechina ye2020 pakati pekuwedzera kwenyaya dzeCOVID-19, zvichinonoka kupfuura 33.4 muzana mukota yapfuura.
Hupfumi hwacho hwakawira mukudzikira kwenyika muna Kukadzi, mwedzi mwedzi World Health Organisation isati yazivisa Covid-19 denda.
Hupfumi hwakatengwa pamushure-Kushungurudzika rekodhi 31.4% mukota yechipiri yakazowedzerazve kune 33.4% kuwana mumwedzi mitatu inotevera.
Chirevo cheChina chakange chiri chekutanga Chekufungidzira Dhipatimendi rekukura kwekota.
"Kuwedzera kwechina kwechina GDP kwakaratidza kuenderera mberi kwehupfumi kubva mukudzikira kwakanyanya pakutanga kwegore uye kuenderera kuri kuita kwe COVID-19 denda, kusanganisira mirau mitsva uye kuvhara kwakaitika mune dzimwe nzvimbo dzeUnited States," department rakati muchirevo.
Kunyangwe paine hupfumi hwakadzikira muhafu yepiri yegore rapfuura, hupfumi hweUS hwakadzikira ne3,5 muzana pagore rese ra2020, zvichienzaniswa nekuwedzera kwe2.2 muzana mu2019, sekureva kwedhipatimendi.
Post nguva: Kubvumbi-29-2021
Tanga Basa Rako
Nyore kufurirwa Iron Zone, Shijiazhuang, Hebei, China